SO - Keskustanuoret
DHALINYARADA XISBIGA DHEXDHEXAADKA EE FINLAND
Waxay dhiirogeliyaan isbeddel
Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waa isbeddel dhaliyeyaal adag waana ururka dhalinyarada ee ugu saameynta badan Finland, kaas oo xubnaha loo oggolyahay inay ku yeeshaan cod iyaga u gaar ah waxayna leeyihiin fursad ay ugu kobcaan shaqsi ixtiraamaya kala-duwanaanshaha iyo dabeecadda. Way fududahay inaad ugu biirto Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland sida aad tahay. Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waa koox leh waayo-aragnimo heer sare ah oo yaqaano sida loo qoslo - gaar ahaan isku qoslo
Waxay horumariyaan gobolka
Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waxay sameeyaan dadaal xooggan ay ku horumarinayaan sinaanta gobolka waxayna xooga saaraan muhiimadda gobolku u leeyahay dadka ku nool - iyada oo aan loo eegin halka ay ku sugan yihiin.
Waxay ogalaadaan inaad sidaada ahaato
Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waxay u arkaan kala duwanaanta horumar. Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waxay soo dhaweyaan kala duwanaanshaha waxayna u aqbalaan dhammaan xubnaha cusub sida ay yihiin.
Waxay ku dhiirrogeliyaan xubnahooda inay noqdaan muwaadiniin wanaagsan
Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waxay dhiirigeliyaan waxayna u barbaariyaan dhalinta si ay u noqdaan dad waaweyn oo masuul ka ah fayoqabka naftooda iyo dadka kale. Arrimaha waxaa la xalliyaa iyada oo la adeegsanayo wadahadal wax ku ool ah iyo gorgortan iyadoo la qadarinayo kala duwanaanta.
Waxay ilaaliyaan xiriirka dabiiciga ah
Joogtaynta xiriirka dabiiciga ee dhabta ah iyo kan dhowba waa muhiim Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland . Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waa u doode xooggan ee ka faa'idaysiga macquulka ah iyo ka faa'idaysoga waara ee deegaanka.
FIKRADDA AADANAHA EE ASALKA U AH QIYAMKEENA
Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waxay u maleeyaan in go'aan qaadashada bulshadu ay tahay inay noqoto mid dadka ku habboon oo dadka u janjeerta. Ma qeexno waajibaadka bulshada iyo dowladda marka laga eego aragtida maareynta raasumaalka. Taa baddalkeeda, waxaan u maleynaa in wanaagga aadanaha iyo bani-aadminnimada loo tixgeliyo inay tahay mudnaanta koowaad ee dhammaan horumarinta bulshada.
Asalka fikradeed ee Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waxaa aasaas u ah aaminsanaanta dadka; dadku, dabiici ahaan way, firfircoon yihiin waana jilaayaal horumarka u janjareera kuwaasoo kobaca garaadkooda tahay in la taageero. Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waxay u maleynayaan in horumarka garaadka, tus. noqoshada mutacalim iyo waayo-arag, ay tahay barta laga bilaabo horumarka bulshada oo dhan. Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland waxay xooga saaraan garashada wanaagga aadanaha: fursadda qofka ku hormariyo naftiisa, waxbarashada, shaqada, lahaanshaha hiwaayado, is-muujinta, lahaanshaha xiriiro wanaagsan, ku lug yeelashada iyo noqoshada ujeedadda dulqaadka firfircoon, xornimada, masuuliyada, iyo wanaajinta tayada nolosha.
Fikradda aadanaha waa asalka u afarteena qiyam:
Waxbarashada iyo waayo-aragnimada
KU BIIR DHALINYARADA XISBIGA DHEXDHEXAADKA EE FINLAND!
Haddii aad ku biirto Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland , waxaan dammaanad qaadeynaa in aad waxqabad badan iyo wadaag yeelan doonto noloshaada. Waxaan sidoo kale dammaanad qaadaynaa in aad fursad u yeelan doonto inaad isbeddel sameyso iyo waddo toos ah halkaas oo siyaasadda dhabta ah lagu qabto. Dadka da'doodu u dhaxayso 15–29 sano jir waxay noqon karaan xubno.
Markaad xubin ka tahay Dhalinyarada Xisbiga Dhexdhexaadka ee Finland, waxaad fursad u leedahay inaad si toos ah saameyn ugu yeelato howlaha xisbiga, sidaas darteedna, arrimaha ku saabsan dalka oo dhan. Waxaad sidoo kale fursad u heli doontaa inaad kaqaybqaadato koorasooyin tababar oo la xiriira siyaasadda iyo hawlaha ururka, si aad uga horumarto labada dhinacba.
Miyaad xiiseyneysaa? Ma jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato?
La xiriir guddoomiyahayaga Suvi Mäkeläinen si aan uga wadahadalno sida ugu wanaagsan ee aad uga qaybqaadan karto waxqabadkayaga! suvi.makelainen@keskustanuoret.fi, +358 50 384 6820